Dhaawacyada ka dhasha raaxada sariirta iyo Habeenka bikra jebinta - Hablaha Media Network
Dhaawacyada ka dhasha raaxada sariirta iyo Habeenka bikra jebinta
HMN:- Waxa ay u eegtahay in wadanka England ay xaraarada raaxada sariirtu aad u badan tahay. Taas oo keenta dhaawacyo kala duwan oo ka soo gaadha lamaanaha hawsha u gaarka ah ku guda jira.
Hadba arintan ayaa waxa baadhitaan ka soo sameeyay Phonepiggybank.com si loo ogaado dhaawaca soo gaadha lamaanaha marka ay raaxaysanayaan oo xaraaradoodu meel sare marayso iyo sida ay u dhacaan.
Hal kamid ah seddexdii qofba mid ayaa waxa ka soo gaadho dhaawac marka uu raaxaysanayo, laakiin waxa ay ogaadaan ama dareemaan dhaawaca maalinta dambe ee xaaladu degan tahay. Waliba dhaawaca ayaa qaar waxa uu gaarsiiyaa in ay maalinta dambe aadin shaqada oo ay guriga joogaan. Hadaba meesha ugu khatarsan ee lagu sameeyo raaxada guurka ayaa ah kursiga qolka fadhiga, halkaas oo ah meesha dhaawaca ugu badani ka dhaco.
Ilaa 10% ayaa ayaguna ka dhaca sariiraha marka ay ku jiraan xiliga jacaylku marayo meesha ugu saraysa. Baadhitaanka ayaa waxa ka mid ahaa in la waydiiyay dadkii la waraysanayay alaabata ku jajabta xiliga la raaxaysanayo.
Dhaawacyada kala duwan ee soo gaadha lamaanayaasha ayaa ah: 1. Muruq dhaawacma 2. Dhabar xanuun 3. Diirka oo ku xoqma ka dibna noqda sidii mid gubta. 4. Qoor xanuun 5. Jug ka soo gaarta jilbaha.